Voahaja ny didin’ny Hcc : Nahazo seza avokoa ny Tim sy ny Mapar -
AccueilRaharaham-pirenenaVoahaja ny didin’ny Hcc : Nahazo seza avokoa ny Tim sy ny Mapar
Omaly ny fe-potoana farany nodidian’ny fanapahana navoakan’ny Hcc fa hamoahana ny lisitry ny mpikambana ao anaty governemantan’ny fisokafana. Ny fotokevitra amin’izany moa dia ny hoe governemanta handraisan’ny rehetra anjara.
Hita taratra tokoa izany raha mijery ny lisitr’ireo governemanta vaovao. Na ny Tim na ny Mapar dia samy nahazo seza avokoa. Ireo depioten’ny 13 mey, izay nanao fitakiana nandritra ny andro maromaro koa aza dia nahazo seza, toa an-dry Guy Rivo Randrianarisoa avy amin’ny antoko Tim. Nafana fo tamin’ny tolona teo an-kianja tokoa ity solombavambahoaka ity, ary niady mafy ny tombontsoan-dRavalomanana. Izy moa no voatendry ho minisitry ny Indostria, toerana izay tena nirian’ny ankolafy Ravalomanana fatratra. Manana olana tamin’ny fisokafan’ny orinasany mantsy Ravalomanana ka inoany fa hitondra rivo-baovao eo anivon’ity ankolafy ity ny fahatongavany eo amin’io sehatra io.
Tsy latsa-danja amin’izany koa ny ankolafy Rajoelina, izay nahazo seza avokoa ireo mpitolona tetsy amin’ny 13 mey. Tena tanteraka antsakany sy andavany araka izany ny maha govenemantan’ny fisokafana ity indray mitoraka ity. Ilay mpitari-tolona teo an-kianja mihitsy no lasa minisitry ny Fanajariana ny Tany. Niadivan’ny Mapar fatratra io minisitera io, ary nanaovany lahatsoratra manokana tanaty gazety mihitsy izay mikendry io minisitera io. Voaporofo araka izany ny fahavononan’ny Filoha Hery Rajaonarimampianina hamaha ny olana politika sy hikarakara fifidianana mangarahara eken’ny rehetra.